Ihlabathi Ukuza kuthi ga ngoku-Ezona ndaba zilungileyo NAMHLANJE
Inkwenkwe eneminyaka eli-14 ubudala ibetha ingwenya ngenqindi ebusweni ibaleka emva kokuba eli rhamncwa livalele ulutsha emihlathini yalo lizama ukumrhuqela ukuba afe.
Juni 2, 2022 yi admin
Omnye okwishumi elivisayo wasinda ngokungummangaliso imihlathi yengwenya ngokuyibetha entloko. U-Om Prakash Sahoo, oneminyaka eli-14 ubudala, wayekunye nabahlobo bakhe kuMlambo iKani eIndiya xa eli rhamncwa lamkrazula phantsi kwamanzi laza lamrhuqela ukuba abulawe. 1Umntwana ofikisayo ukwazile ukubaleka emihlathini yengwenyaItyala: Alamy... ufunde kabanzi
izigaba Iindaba Zokugqibela Iilebula selula, años, yirhuqa, Irhamncwa, ubuso, ingwenya, emva, iyavala, Entre, ukubaleka, imihlathi, betha, ukuya phambili, ukufa, umntwana, for, Bakhe, kuphatha Shiya amazwana
Omnye okwishumi elivisayo wasinda ngokungummangaliso imihlathi yengwenya ngokuyibetha entloko. U-Om Prakash Sahoo, oneminyaka eli-14 ubudala, wayekunye nabahlobo bakhe kuMlambo iKani eIndiya xa eli rhamncwa lamkrazula phantsi kwamanzi laza lamrhuqela ukuba abulawe. 1Umntwana ofikisayo ukwazile ukubaleka emihlathini ye ... ufunde kabanzi
Ndabaleka kwintsapho yakowethu yama-Amish xa ndandineminyaka eyi-18
Umama owakhuliswa e-Amish watyhila indlela abafazi kunye nabantwana abaphathwa ngayo kakubi ngokwesondo kwaye "benqatshelwe" kwiintsapho zabo ukuba baye baphula imithetho. Xa u-Emma Gingerich oneminyaka engama-36 ubudala wabaleka ekuphela kobomi bakhe wabazi eneminyaka eyi-18, wayenemfundo yebanga lesithoba kuphela ... ufunde kabanzi
izigaba Iindaba Zokugqibela Iilebula Amish, años, xa, ubaleke, familia, umbulo, ndibene Shiya amazwana
Imfihlakalo njengenjineli yaseBritane eneminyaka engama-37 yadutyulwa yabhubha nabahlobo ababini kwivenkile enkulu yaseMexico ngelixa wayethenga.
INDODA yaseBritani yadutyulwa yabulawa kwivenkile enkulu yaseMexico ecaleni kwezihlobo zayo ezimbini xa abazali bayo abanxungupheleyo bathi ‘ikwindawo engalunganga ngexesha elibi’. Injineli yeSoftware uBen Corser, oneminyaka engama-37, waseCornwall, wadutyulwa ngelixa wayesenza imisebenzi e-Colima, kwintshona yeMexico, ... ufunde kabanzi
izigaba Iindaba Zokugqibela Iilebula bahlobo, años, wabulawa, IBritane, njengaye, ithengiwe, nge, Ezimbini, Injini, WaseMexico, Ngelixa, imfihlakalo, ivenkile, ukudubula Shiya amazwana
'Zombie' ukrebe uhlasela ixhoba leesentimitha ukusuka kwidiver eyothukileyo
Lixesha eloyikekayo elithi "zombie" shark ihlasele ixhoba layo ngee-intshi ze-diver ekhwankqisayo, kwaye bonke bathetha into enye. U-Euan Rannachan, oneminyaka engama-36 ubudala, wayekwiSiqithi saseGuadalupe, malunga neekhilomitha ezingama-200 ukusuka kunxweme lwelizwe laseMexico, xa ukrebe omkhulu omhlophe wavela waza wahlala emanzini. … ufunde kabanzi
izigaba Iindaba Zokugqibela Iilebula uhlaselo, ndothukile, diver, iisentimitha, phambili, ushaka, ZOMBIES Shiya amazwana
UPutin wanyangelwa 'umhlaza ophambili ngo-Epreli' njengoko 'isiphelo sinokusondela' kuzwilakhe wase-Kremlin, iinkosi zentlola zase-US zithi.
U-Vladimir Putin ogulayo wanyangelwa umhlaza ophezulu ngo-Epreli, iintloko zentlola zase-US zithi. Amagosa aphezulu kuthiwa athi abancedisi ngaphakathi eKremlin "baziva ukuba isiphelo sisondele" kuzwilakhe waseRussia oneminyaka engama-69. 2 Umongameli waseRussia uVladimir PutinItyala: AP 2Putin udibana noBoris Titov, ummeli we… ufunde kabanzi
Yintoni i-rhinoplasty kwaye ziziphi iingenelo zayo?
Juni 2, 2022 Juni 2, 2022 yi admin
Ngenxa yezizathu zempilo okanye ubuhle, i-rhinoplasty yindlela efanelekileyo yokulungisa okanye ukulungisa impumlo. Abantu abaninzi ngakumbi baphendukela kule nkqubo ukusombulula ingxaki ethile yeempumlo. Kodwa yintoni kanye kanye kwaye zeziphi iingenelo eziphambili? Inqaku lethu namhlanje lijolise ekucaciseni… ufunde kabanzi
Yintoni ukuthengisa kwaye yenzelwe ntoni?
Ingeniso yorhwebo idlulela ngaphaya kokuswela, ekubeni kufuneka ubuchule obufak’ isandla koko kunqweneleka ukuba kuphunyezwe. Namhlanje, ukuthengisa kusebenzisa ulwazi olwahlukileyo oluye lwamkelwa kwiminyaka edlulileyo ukukhuthaza ukuthengwa ngabathengi. Ukuthengiswa kweenkampani kuku... ufunde kabanzi
UBarack Obama ukhokela iPlatinum Jubilee imbeko kuKumkanikazi ovela kwihlabathi liphela njengoko uPopu kunye noMacron bethumela imiyalezo
UBARACK Obama uthe ukumkanikazi “undikhumbuza umakhulu wam” njengoko abantu behlabathi bevuyisana noKumkani ngerekhodi lakhe leminyaka engama-70 esetroneni. Le ndoda ineminyaka engama-96 ubudala yinkosi yokuqala yase-Bhritane ukubhiyozela unyaka weplatinam kwaye abalandeli basebukhosini kwihlabathi liphela baye... ufunde kabanzi
UMama wadlwengulwa kuloliwe ngumhloli wamatikiti nabanye abathathu emva kokuhendelwa kwiklasi yokuqala
UMAMA udlwengulwe kuloliwe ngumhloli wamatikiti kunye namanye amadoda amathathu emva kokuba ekhweliswe kwikhareji lodidi lokuqala. Umama omncinci wabantwana ababini wasishiya isihlalo sakhe seklasi yezoqoqosho emva kokunikwa igumbi eline-air-conditioning ngexesha ... ufunde kabanzi
Iphepha1 Iphepha2 ... Iphepha1.358 Elandelayo →
Ihlabathi Ukuza kuthi ga ngoku | 2022